Muuri News Network » MD: Shariif Xasan oo hal Arrin ka dalbaday Shacabka Maamulkiisa ku hoosnool.
MD: Shariif Xasan oo hal Arrin ka dalbaday Shacabka Maamulkiisa ku hoosnool.
Shariif Xasan sheekh aadan Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ayaa markii ugu horeysay shacabka Maamulkiisa ku hoosnool ka dalbaday inay taageero u muujiyaan Ciidamada Ethiopia ee qeybta ka ah AMISOM.
Madaxweyne Shariif Xasan ayaa sheegay in shacabka aysan si dhab ah ula shaqeyn Ciidamada Ethiopia, waxa uuna dalbaday in shacabka ay muujiyaan kaalintooda si uu yiri meesha looga saaro awooda ay sheeganeyso maleeshiyada Al-shabaab.
Shariif Xasan ayaa codsigaani ka sheegay kulan looga hadlaayay arrimaha amniga oo maalmihii danbe ka socday magaalada Baydhabo, waxa uuna Shariif ku qeyla dhaamiyay in maleeshiyada Al-shabaab ay xiligaani ugaarsi ku heyso shacabka, islamarkaana leyskala soo gudbay beegsiga Madaxda.
Sidoo kale, Shariif Xasan waxa uu tilmaamay in iminka ay wadaan tababaro lasiinayo maleeshiyaad laga soo aruurinayo bulashada gobaladaasi oo la doonayo in ay noqdaan Ciidamada maamulkaasi si ay uga qeyb qaataan hawlagalada amniga lagu sugayo.